U-Obregón wondla abadlali bebhola abaziwayo kwibhola ekhatywayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Con iligi sele izakuphela kunye neyokugqibela yeChampions League, edibanisa amaqela amabini aseSpain avela kwikomkhulu, iya kukhokelela kwi-Eurocup ukuze izizwe ezahlukeneyo zelizwekazi laseYurophu zijongane. Isijikelezi-langa sebhola ekhatywayo apho iinkwenkwezi ezibengezelayo zibonakala zifana nezo zaseHollywood kunalawo madoda awushiyileyo umsebenzi wawo webhola ekhatywayo kwiminyaka yee-XNUMX ngenxa yomenzakalo omubi.
I-Illustrator kunye nomzobi wegraphic uFulvio Obregón ujolise kuyo zoba abadlali bebhola ekhatywayo abaziwayo ngabo bonke abanjengoLionel Messi okanye uCristiano Ronaldo ukubabonisa kakuhle kwaye bavele nelinye ithoni yomzimba, iphupha elibi kubaqeqeshi bomzimba kwaye kungekho mntu uya kufuna ukujongana naye. Uthotho lobuchule kunye nolubalulekileyo lwemifanekiso eyenziwe leli gcisa laseColombia.
Olu luhlu lulandelelwano lwangaphambili oludlulileyo yaya kwintsholongwane enkosi kwinto yokuba ebe "ipakethi ezintandathu" kwiinkwenkwezi zeqela ngalinye lebhola ekhatywayo kwiNdebe yeHlabathi ka-2014 eBrazil.
UJames, uMessi, uCristiano Ronaldo, UNeymar, u-Iniesta, u-Falcao, UBenzemá, uBalotelli okanye uRobben bayinxalenye yabalinganiswa abalingisele umsitho ngokungathi batyisiwe ukuze bangabinakho ukwenza naliphi na iqhinga labo lebhola ekhatywayo.
Kwezemidlalo apho iphumelela khona eyona milo ibonakalayo, eyona mvelaphi ilungileyo kunye nezona zakhono zibalaseleyo kwezemidlalo, igcisa laseColombia liya kwelinye icala ukuyokundulula ukutyeba, ubunzima obongezelelekileyo kunye nobuso obudumbileyo baba bazobi bebhola badumileyo abaya kumzobo kaObregón.
UFulvio Obregón unayo yakho Behance y I-instagram yakhe yantoni ungaqhubeka naloo msebenzi Wenza iplanethi yebhola ekhatywayo apho ahlala ebonisa eminye yemidlalo ebaluleke kakhulu enxulumene nebhola.
Wayikhupha nale Uhlobo loonobumba ababanjiweyo yeklasikhi yeReal Madrid ngokuchasene neBarcelona eqhubeka nokudibanisa izigidi zababukeli kwihlabathi liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ukuhlamba abadlali bebhola abadumileyo emhlabeni